avylavitra · Marsa 2010 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Marsa, 2010
Editor/Translator for Lingua Malagasy · Nanomboka nandika tamin'ny 10 Marsa 2008 · 2712 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Marsa, 2010
Ejipta: Mafana fo nosamborina noho ny famoronana vondrona Facebook
Ejipta 29 Marsa 2010
Dr. Ashraf Wagdy, Ejiptiana iray mafana fo avy amin'ny elatra havia, dia nosamborina omaly tamin'ny 7 ora hariva ora iraisam-pirenena. Nanangana vondrona Facebook iray izy mba ho tosika ho an'i Mohamed ElBaradie amin'ny hazakazaka ho amin'ny Fitondrana (Prezidansa). Manao fitokonana tsy mihinan-kanina izy izao mba ho fanerena amin'ny hamotsorana azy, ...
Ejipta: Fanapahan-kevitry ny governemanta hanakana ny Skype mampiasa ny Modem USB
Ejipta 16 Marsa 2010
Toa miezaka ny hifehy ny habaky n y aterineto ny governemanta Ejiptiana raha ny tsaoa ary ireo mponin'ny aterineto dia miroso hatrany mankany mankany. Na dia hoe, tsy ananana porofo aza ny andrana maro nataon'i Ejipta hifehezana ny vohikala sy ireo tolotra anivon'ny aterineto, dia maro ny làlana arahan'ny governemanta...
Lahatsoratra iray hiadiana amin'ny Sivana aminy Aterineto
Hafanàm-po nomerika 15 Marsa 2010
Mino ny Fahalalahana Miteny ve ianao? Heverinao ve fa azon'ny saina leferina ny fitarafana ny momba anao sy ny fitsikilovana anao rehefa eo amin'ny aterineto?! Heverinao ve fa zonao ny misitraka fikarohana&fitorahana blaogy tsy misy sivana amin'ny Aterineto? Mino ny Fahalalahan'ny Vaovao ve ianao? Ny Zo Hahazo Vaovao? Maniry ve...
Italy :Nanameloka mpitantana telo ao amin'ny Google noho ny tsy fanajàna ny fiainana manokana
Italia 06 Marsa 2010
Tamin'ny herinandro lasa teo, mpitsara Italiana iray no nanameloka tomponandraikitra ambony telo avy amin'ny Google tamin'ny tsy fanajàna ny lalàna Italiana mikasika ny fiainana manokana noho ny video iray nampakarina tao amin'ny Google Video tamin'ny faramparan'ny 2006, izay nampiseho zaza sembana iray rabirabian'ireo ankizy hafa mpianatra tao Turin. Nahazo sazy...
Philippines: “Fifanaraham-panambadiana azo havaozina”
Filipina 06 Marsa 2010
Vondrona politika iray ao Philippines no maniry hampiditra volavolan-dalàna mametraka ny fetram-pifanaraham-panambadiana iray ho manankery mandritry ny folo taona. Araka ny nanampoizana azy dia niteraka fanehoan-kevitra mivaivay eo anivon'ny fitorahana blaogy ity tolo-dalàna tokana an-tany ity.
Egypta: mpitoraka blaogy iray nalefa hiatrika fitsarana miaramila noho ny lahatsoratra nataony efa ho herintaona lasa izay
Ejipta 01 Marsa 2010
Sambany teto Egypta, nalefa hiatrika fitsara-miaramila noho ny zavatra nosoratany teto amin'ny aterineto ny mpitoraka blaogy iray. Ahmad Mostafa (mpianatra) dia nanoratra tao amin'ny blaoginy Maza Asabak ya Watan (Inona no maharary anao, Ô ry Fireneko?! “What Weent Wrong With You oh My country?!”) mikasika mpianatra iray avy tao amin'ny...